Amathiphu ama-4 okusiza indoda yenqabe ngendlela efanele - Psychology 2022
Amathiphu ama-4 okusiza indoda yenqabe ngendlela efanele
Ungamenqaba kanjani ngesizotha umlandeli ongenamizwa ngaye, ukuze angaziboni ecasukile?
Yonke intombazane okungenani kanye yazithola isesimweni lapho idinga ukusho “cha” endodeni ewujuqu. Kodwa indlela yokwenqaba kahle umlandeli, ukuze ungamniki ithemba lamanga futhi uhlangabezane nemizwa engemihle encane ngesikhathi esifanayo.
1. Khuluma iqiniso ngaso leso sikhathi, kodwa ube nesizotha
Amantombazane amaningi akhetha ukuphendula indoda lapho ecelwa ukuba achithe usuku lothando ndawonye ngokungacacile: "Ngimatasa kuleli sonto, mhlawumbe ngempelasonto ezayo?" Intsha eningi iyaqonda ukuthi kukhona ukwenqaba kwamagama anjalo.
Kodwa ngesinye isikhathi akudingekile. Kungenzeka ukuthi abanye abalandeli bakho bazobuyela odabeni lokuchitha isikhathi ndawonye ngesonto. Futhi futhi kuzomele uqhamuke nezaba zakho. Yingakho khuluma iqiniso ngaso leso sikhathi, kodwa ube nesizotha kakhulu. Indlela elula yokusho ukuthi usothandweni noma usebudlelwaneni obujabulisayo nesoka/umyeni wakho.
2. Ungadlali ngothando
Ngesikhathi sokwenqaba, musa ukudlala ngothando nomfana, ngaphandle kwalokho angase acabange ukuthi "cha" wakho "yebo" omboziwe.
3. Ungabeki izaba zokulahlwa futhi ungazizwa unecala
Yiba ne-laconic. Akufanele usho imishwana ngesikhathi sokwenqaba - "akukona ngawe, kodwa ngami", "umuhle kakhulu futhi ngokuqinisekile uzozitholela intombazane engcono kunami …" njalonjalo. Esimweni esinjalo, wena naye ningazizwa nikhululekile.
Akuwona wonke amadoda abekezelayo futhi anele ukwaliwa. Ngakho-ke, uma ngokubuyisela uthole ukudelela nokuhlambalaza, noma kunjalo ungaphenduli ngendlela enomusa, kodwa mane uqede ingxoxo ngokushesha ngangokunokwenzeka.